အဆိုပါ MU ရုရှားလမ်းကြောင်းဖုံးအုပ်တူရကီအတွက်ခါးပတ်လမ်း,? | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီအဆိုပါ MU ရုရှားလမ်းကြောင်းဖုံးအုပ်တူရကီအတွက်ခါးပတ်လမ်း,?
19 / 11 / 2019 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
လမ်းမျိုးဆက်ယကြက်ဆင်ပေါ်သည်ငါတို့အဘို့တံခါးကိုအပေါ် Rusyn အဘိဓါန်လမ်းကြောင်း
တူရကီအတွက်ခါးပတ်လမ်း, တံခါးရုရှားရဲ့လမ်းကြောင်း MI?; ဥရောပမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးကုန်တင်ရထား၏နယ်ပယ်အတွင်းခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်းတူရကီ၏ပဲ့တင်သံတွေထွက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဗဟိုစင်္အမည်ရတူရကီ, တရုတ် - ဥရောပအကြားအကွာအဝေးလျှော့ချနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်တူရကီဖြစ်ပါတယ်, ရုရှားလက်ကနေလမ်းကြောင်း၏အားသာချက်ယူလုပ်ခဲ့တယ်
Belt Belt စီမံကိန်း၏နယ်နိမိတ်အတွင်းတရုတ်ပြည်မှကုန်ပစ္စည်းရထားများသည်ဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွှယ်နေသောပြoneနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများသည်လေကြောင်းခရီးစဉ်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး၊ ထို့ကြောင့်ပေကျင်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုကကမ္ဘာအနှံ့ရှိရထားလမ်းများသို့ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှထွက်ခွာသောရထားများသည်အာရှအလယ်ပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်တွင်ဥရောပသို့ရုရှားမှတစ်ဆင့်စတင်ပျံသန်းသွားပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘာကူ - တီဘီလီစီ - ကတ်လိုင်းကိုဖြတ်ပြီးနောက်ရထားသည်အင်ကာရာသို့၊ ထို့နောက်အစ္စတန်ဘူလ်မှတစ်ဆင့်ဥရောပသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Marmaray ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ "တူရကီ, ရုရှား၏လမ်းကြောင်းဖမ်းဆုပ်သလဲ?" မေးကပိုမကြာခဏမေးမွနျးခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ Marmaray မတိုင်မီကုန်တင်ရထားများသည် Istanbul ကိုထပ်မံအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ကုန်ပစ္စည်းများဖြန့်ဝေပေးသောရေကြောင်းခရီးသည်စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ယခုဤအခြေအနေနှင့်တရုတ်၏အယောင်ဆောင်အလယ်တန်း - တူရကီရဲ့လက် inince ဥရောပ 18 ရက်ပေါင်းကြားအကွာအဝေးဟာ Marmaray နှင့်အတူခိုင်မာစေခဲ့သည်ပြောနိုင်ပါတယ်။
CARGO မျှော်လင့်ချက်များ၏နှစ်ပတ်လည်5သန်းတန်ချိန်
သတင်း Nikki အာရှလမ်းကြောင်းများအတွက်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းက်ဘ်ဆိုက်များကိုလည်းရုရှားနှင့်တူရကီဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ Istanbul Koc တက္ကသိုလ်ဒြေ။ တရုတ်နိုင်ငံကဥများအားလုံးကိုရုရှားခြင်းတောင်းထဲမထည့်ချင်ဘူး။ 'ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ကရုရှားကိုအစားထိုးမယ်' လို့မပြောနိုင်ဘူး။ သို့သော်တရုတ်မျိုးစုံနှင့်ခိုင်ခံ့စေတူရကီနှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံ၏ဆက်ဆံရေး၏လက်သူဟုအဖြစ်ကိုးကားခဲ့သည်ရုရှားလမ်းကြောင်းများ "ကိုတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ TCDD မှအထွေထွေမန်နေဂျာ Ali İhsan Uygun မှ Nikkie Asian Review ကိုပြောကြားရာတွင် 2023 ပြီးနောက်နှစ်စဉ်ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတန်ချိန်သန်းပေါင်းများစွာကို Istanbul လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်ပို့ဆောင်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တူရကီ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဆိုအရ, မြေ, ပင်လယ်, လေနှင့်ရထားလမ်းလင့်များနှင့်ပထဝီတည်နေရာအသုံးအနှုန်းများအတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိပတ်ဝန်းကျင်အရသိရသည်အဖြစ်ရာသီဥတု။ ဒါပေမယ့်တရုတ်တူရကီရဲ့ဗဟိုစင်္လည်းအများကြီးပိုမကြာခဏယခုပြောပြီကမ်းလှမ်းကြောင်း။ ရှင်းပါတယ် တဖန်မှတ်ချက်များအရသိရသည်လာမယ့်ကာလ၌တူရကီမှတရုတ်ဘို့ ပို. ပင်အရေးကြီးသောဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
2013 တွင်ကြေငြာခဲ့သော Generation Road သည်လျင်မြန်စွာအကောင်အထည်ဖော်နေသည်။ ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှအောက်တိုဘာကြားတွင် Generation Road ကိုအတည်ပြုသောတရုတ်နှင့် 68 နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်မှုမှာ 950 ဘီလီယံဒေါ်လာကျော်ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းတွင် 20 ကုန်တင်ရထားတစ်ထောင်နီးပါးရှိကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Xi'an မှပရာ့ဂ်သို့စတင်ပျံသန်းခဲ့သည်။ လမ်းကြောင်းကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်။ ကာဇက်စတန်, အဇာဘိုင်ဂျန်, ဂျော်ဂျီယာ, တူရကီ, ဘူလ်ဂေးရီးယား, ဆားဘီးယား, ဟန်ဂေရီ, လိုဗက်ကီးယားနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ။ ဤလမ်းကြောင်းကိုမကြာသေးမီရက်များအတွင်းကစတင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Marmaray ၏ကျေးဇူးကြောင့် 18 သည်တရုတ်ပြည်မှဥရောပသို့ဆင်းလာသည်။
Yiwu မှစ။ XIUMX
14 သည်တရုတ်နိုင်ငံ Yiwu မှဥရောပသို့ပထမဆုံးရထားခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ နိုဝင်ဘာ 2014 တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ယခု Yiwu မှ 11 အမှတ်သို့ဥရောပတစ်ခွင်ကုန်ပစ္စည်းရထားများစီးလာသည်။ ထို့အပြင်ထိုရထားများသည်သူတို့သွားသည့်တိုင်းပြည်များမှအချည်းနှီးမပြန်ပါ။ ကမ္ဘာ့စူပါမားကက်အဖြစ်သတ်မှတ်သော Yiwu, China၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ Liege (20 ရက်)၊ အင်္ဂလန် (22 ရက်) နှင့်ဖင်လန်နိုင်ငံ Kouvola (17 ရက်) သို့ပျံသန်းသည်။
ဥရောပသို့ကုန်တင်ရထားများဆိုက်ရောက်ပြီးနောက်တရုတ်အွန်လိုင်းဈေးဝယ်ကုမ္ပဏီ Alibaba မှပိုင်ဆိုင်သည့် eHub သည်လာလိမ့်မည်။ Yiwu မှပေးပို့သောကုန်ပစ္စည်းများကို eHub မှတဆင့်အခြားဥရောပမြို့များသို့ပို့လိမ့်မည်။ (Çinhabဖြစ်ပါသည်)
အသစ်ရထားလမ်းရုရှားနှင့်အီရန်ကျင်းပတဲ့ CIS နှင့်အတူကုန်သွယ်ရေးအရှိန်မြှင့်ပါလိမ့်မယ်
ရုရှားလာမယ့်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် Load Wagon
မိန့်ထုတ် Vladikavkaz ၏ရုရှားမြို့အဘို့အသစ်ပေါ်လာတာဟာအရင်